एमाले र माओवादीको नयाँ सर्तः अब के गर्ला मोर्चा ? - SangaloKhabar
एमाले र माओवादीको नयाँ सर्तः अब के गर्ला मोर्चा ?
काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा लैजान लचिलो भएको छ ।
यद्यपी एमाले विधेयक पास गराउने विषयमा लचिलो भएको छैन । एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई फेल गराएको खण्डमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले कस्तो कदमचाल्छ भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ । यसो त एमाले र माओवादी केन्द्रले मोर्चासामु केहि सर्तसमेत राखेका छन् ।
एमालेले मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ १७ गते मधेशी मोर्चाका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन प्रश्न गरेका थिए । ती चार प्रश्नको जवाफ लिएर आउन उनले मधेशी मोर्चाका नेतालाई भनेको रातोपाटीमा समाचार छ ।
१. निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी आन्तरिक रुपले भन्ने अनि विधेयक पास भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा तपाईहरु मान्नु हुन्छ कि मान्नु हुन्न ?
२. संशोधन विधेयक संसदमा पेस भएपछि त्यो पास भएपनि नभएपनि तपाईहरु निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनु हुन्न ?
३. स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन आपसि छलफलमा परिमार्जन भएपछि त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने ?
४. संशोधन विधेयक परिमार्जन हुने कुरा पहिला जे सहमति भएको थियो, त्यो अनुसार भयो भने भने मान्ने कि नमान्ने ?
– जसरी तीन दलले चुनावको मिति घोषणा गर्न सहमति जनाएको छ । त्यसरी नै संशोधन विधेयक पारित गराउनमा सहमति जनाउनुपर्छ ।
– हाम्रो माग भनेको तीन दलले मिलेर संशोधन विधेयकलाई पारित गराउने हो ।
– सत्ताधारी दलसँग हाम्रो तीन बुँदे सहमति भएको छ, सरकारले संशोधन विधेयक प्रस्ताव संसदमा लगेको छ पास गराउने जिम्मा सरकारका हो ।
– हामीले राखेका माग अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ
– सविधान संशोधन भएपछि पहिला केन्द्रको अनि प्रदेशको चुनाव गराएर स्थानीय तहलाई प्रदेशमार्फत राखि मात्र चुनाव गराउनुपर्छ
– हाम्रा २६ बुँदे मागहरु छन् ती पूरा भए मात्र चुनावमा भाग लिन्छौ ।
– सरकारद्धारा संसदमा दर्ता गराइएको सविधान संशोधन विधेयकलाई आपसी सहमतिका आधारमा परिमार्जनसहित पारित गराउनुपर्छ ।
– मोर्चाले माग गरेको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष हुन्छ ।
– मधेशी मोर्चा र सरकारबीच साउन १९ गते भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
– आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
– आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकामध्ये बाँकी रहेकालाई सहिद घोेषणा गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १२, २०७३ समय: १६:२३:५८